May 2, 2020 1890
महोत्तरीको बिजलपुरा र मेधनाथ गोरहन्नामा १० दिनमा ११ जनाको मृ’त्यु भएपछि त्रा’स फैलिएको छ। मृ त्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा शनिबार राति २ बजेतिर भंगहा नगरपालिका-६ जमुनियाँका पल्ट साहको मृ’त्यु भएसँगै रहस्यमय तरिकाले मृ’त्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको हो।
गाउँमा धमाधम मानिसहरुको मृ त्यु भएपछि स्थानीयहरु त्र’सित भएका छन् भने गाउँ शो’कमा डुबेको छ। बैशाख १० गते यता बर्दिबास नगरपालिका -१२ स्थित बिजलपुराको जुरीटोल र अहिमान टोलमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी भंगहा नगरपालिका-६ हत्तिसर्वाको जमुनियाँ र वडा नम्बर-७ को मेघनाथ गोरहन्नामा ७ जनाको मृ त्यु भइसकेको छ।
कमाएर दैनिक गुजारा गर्दै आएका उनीहरुको के कारणले मृ त्यु भयो ? भन्ने प्रष्ट छैन। मृ’त्यु भएकाहरुमा अचानक पेट दुख्ने, श्वास लिन ग्राहो हुने, बान्ता र झाडापखाला लाग्ने लक्षण देखा परेको छ। कतिको राति ओछ्यानमै सुतेको अवस्थामा मृ’त्यु भएको छ भने कतिको उपचारकै क्रममा ज्या’न गएको हो।
लकडाउनका बेला अज्ञात रोगबाट मृ’त्यु भएको भन्दै गाउँले त्रसि’त बनेका छन्। स्थानीय केही व्यक्तिले बिषाक्त मदि’रा पिएर मृत्यु भएको बताउँछन्। तर, मदि’रा नपिएकाहरुको पनि ज्यान गएकोले अरु कुनै रोगको संक्रमण भएको हुन सक्ने उनीहरु बताउँछन्। मृ’त्युको कारण खोज्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि गिरिराजमणी पोखरले गाउँ पुगेका छन्।
उनको साथमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, एसपी श्याककृष्ण अधिकारी, जिल्ला अस्पताल जलेश्वरका डा. राजिब झा लगायत छन्। मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएर घट’नाको अध्ययन गर्न टोलीसमेत घ’टनास्थल आएको बताए। यो समाचार राजकरण महतोले अन्नपुर्ण पोस्ट डट कम मा लेखेका छन्।।
Prevआजको तपाईंको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस् तपाईंको आज शनिबारको राशिफल
Nextइरफानकी श्रीमतीको भावुक पत्र ‘उनीप्रति मेरो एकमात्र गुनासो छ, उनले मलाई जीवनभर बिगारेर गए’